रुकुम (पूर्व) मा आवश्यक उपकरण नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम मोलेर बिरामीको जाँच गर्ने गरेका छन् । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको २ साता बित्दासमेत जिल्लामा एउटा पनि थर्मल गन नआएपछि बिरामीको जाँच गर्न समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
हाल जिल्लामा भारतबाट भित्रिनेको संख्या धेरै भएकाले कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले स्वास्थ्यकर्मी पनि त्रसित छन् । यस्तो अवस्थामा ज्वरो नाप्ने थर्मल गनसमेत नभएपछि लक्षण देखिएका आधारमा बिरामीको उपचार गर्ने गरिएको जिल्ला अस्पताल रुकुम (पूर्व) का डा. पूर्णबहादुर पुनले बताए । हालसम्म जिल्लामा कोरोनासँग मिल्ने लक्षण भएको कुनै पनि बिरामी नभेटिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको पहिलो साता प्रदेश सरकारले जिल्लामा एउटा थर्मल गन पठाए पनि काम नगरेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पठाएको एचटीसी एमटीफो कम्पनीको इन्फ्रारेड थर्मामिटर अहिले त्यत्तिकै थन्किएको डा. पुनले बताए । विभिन्न ठाउँमा राम्रो खालको इन्फ्रारेड थर्माेमिटरको माग गर्दा कतैबाट पनि उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा राखिएका हेल्थ डेस्कमा पनि आवश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको छ । हेल्थ डेस्कमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्सनल प्राेटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) उपलब्ध गराए पनि मास्क, स्यानिटाइजरलगायत सामग्रीकाे अभावका कारण जोखिम मोलेर बिरामी जाँच गर्नुपरेको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक समीर गिरीले बताए ।
उनका अनुसार कोरोना त्रासकै कारण स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई लक्षण सोधेर सल्लाह सुझाव दिने गरेका छन् । त्यसकै कारण अन्य रोगका बिरामीले सास्ती खेप्ने गरेका छन् ।
यस बेलामा अन्य रोगले बिरामी परेका मानिस अस्पतालसम्म पुगे पनि कोरोनाकै डरका कारण स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूलाई जाँच नगरी फर्काउने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो छ । रासस